Elinye lamadolobha amahle kakhulu eSiberia ngokuthi Tyumen itholakala endaweni olunothile - ogwini Tours. Ngaphandle kokuba namathafa amahle edolobheni ukuvula izinhlobo eziningi zokuzijabulisa, kuhlanganise nezingane.
Kuphi nezingane e Tyumen? Umuzi unemisebenzi izindawo lapho kuyoba mnandi ukuba kokubili izingane zabo nabazali babo. Ngokwesibonelo, ukuzijabulisa zezingane eziyinkimbinkimbi "Swarm Park."
Umkhakha omkhulu lapho eziyinkimbinkimbi itholakala, akunakwenzeka ukuba uhlole emahoreni ambalwa. Ngakho-ke, epaki inikeza isivakashi izindlu, amahhotela kanye Cottages.
I "Swarm-epaki" ingane lizobamba ngempelasonto esimnandi kakhulu. Phela, eziyinkimbinkimbi kufaka epaki amanzi, i rink eqhweni futhi epaki intambo nge masimu ezimbili. Ngaphezu kwalokho, bonke abavakashi bamenyiwe ukuqasha ibhayisikili, roller skates, futhi Ukushushuluza ebusika noma ukushushuluza. Futhi epaki kukhona inqola Uzalo ujantshi izingane, zokudlala nokunye okuningi.
Game Center "I Ihlathi of Wonders"
Kuleli qophelo, ingane ayikwazi kuphela ukuthola fun, kodwa futhi ukufunda okuthile ezintsha nezithakazelisayo. Ngokwesibonelo, zezingane ezokungcebeleka abagqugquzeli abavakashela ukwenza testoplastikoy, beading, umqolo polymer ubumba, isihlabathi imidwebo, origami nokunye ukuzijabulisa ethokozisayo.
Njalo ngempelasonto maphakathi uhlela izinhlelo ukuzijabulisa, kodwa futhi ekuphileni kwansuku zonke kukhona into ukukwenza. Isakhiwo ifakwe uxhaxha, a trampoline kanye nezinye izikhungo eziningi.
Kuphi nezingane e Tyumen? A option enhle - "City Golf" labasubathi. Ukuze imikhaya abathanda ezemidlalo nokuzijabulisa, akukho yindawo engcono. Izivakashi bakhuthazwa ukuba bangagcini nje ukudlala mini-igalofu, kodwa nokuba bazame wena 3D-Simulator ukushayela ibanga Simulator, kanye simulators mithathu esebenza Umkhaya Igalofu System. Ngaphezu kwalokho, izingane ithokoze endaweni ekhethekile senzelwe ukuzijabulisa kuyilapho abazali bazo uzame isandla sakhe ukushayela lobubanzi ukuqeqeshwa esisheshayo.
Sesitimela Wezingane e Tyumen
Vele 25 km kusuka dolobha lisendaweni yindawo ujantshi, okuyinto izivakashi ukukhwela isitimela langempela. Ubude umgwaqo 3820 m, unqobe abagibeli engu-45 kuphela. Amazing adventure kuyoba wonke umcimbi ingane, ingane uzokwazi ufunde kabanzi mayelana imvelo.
zoo Mini "Sunshine Ranch"
Mhlawumbe hhayi ukuthola ingane ongamthandi izilwane, ikakhulukazi uma they cha ziyezwakala ngempela. Esikhathini mini-zoo, izingane nazane nangezilwane ezifuywayo, okuyinto zitholakala ezindaweni. Ngakho, kule ndawo bahlala goose, amadada, izinkukhu, amakalikuni ngisho lamaphigaga. Ngaphandle izinyoni, zoo has nezimbongolo, onogwaja, izingulube miniature, Guinea izingulube, ama-raccoon, chinchillas futhi inhloli.
Lo mbukiso zezimvemvane bukhoma tropical
Butterfly Park - kungcono indawo emangalisayo. Kukhona izidalwa ezimangalisayo futhi ethambile uyakwazi ukushaya kokubili izingane zabo nabazali babo. Abahleli sizonikeza kungenzeka yokuzalwa izingane mbukiso. Lesi sipho esimangalisayo ngeke uthumele izingane zangempela inganekwane, futhi ithuba isithombe ne izimvemvane tropical izohamba izinkumbulo ezimnandi for a lifetime. Butterfly Ipaki kungenziwa wavakashela ngisho amaqembu ngangokunokwenzeka (izingane eziyishumi noma ngaphezulu), khona-ke inani ithikithi kuyoba aphansi ($ 100 ingane ngayinye, intengo evamile - ruble 150).
Ipaki Wonderland interactive "Eureka"
indawo emangalisayo okuthiwa i- "Eureka" Itholakala enkabeni yedolobha. Uma lapha, wonke umuntu shí ezweni izimfihlakalo fantasies. Lokhu akusona isimanga, ngoba kukhona ezimbili embileni epaki: ukukhanya nesibuko, Newton pendulum Ames Room, lapho eziningana ukukhohlisa optical nokuningi. Izingane ezingaphansi kweminyaka emi-5 ubudala kungathatha indawo kwepaki mahhala, ngokuthinta ngesikhathi esifanayo yiziphi izinto ngabanye nasezintweni ezazisetshenziswa kudala.
Ukuthi ingane kusuka ebuntwaneni ojwayele ukuphumula kwamasiko, kungenzeka ukunciphisa Tyumen ngonodoli. Kuleli qophelo, izingane bazokwazi uthinte zabuna ezincwadi. Kodwa ngeke usukhathele lapha. Tyumen ngonodoli kuyoba ezithakazelisayo izingane. Ngoba lapha izindaba abadumile netinkondlo ukutshela doll.
Kuphi nengane, ngakho-ke kwaba ezithakazelisayo ngempela ukuchitha isikhathi? Yiqiniso, kule Tyumen State Circus. Umdlalo ejabulisa obonisa ezihlukahlukene izilwane nabantu uyonikeza ingane eziningi imizwelo eyakhayo futhi esiqala ongenakulibaleka. Imibala egqamile, namasu eyinkimbinkimbi futhi ukusebenza emangalisa - konke lokhu kuyabonakala lapha. Uma ingane engaphansi kuka iminyaka 5, khona-ke vakashela isekisi Tyumen State angakwazi ukushaja. Into esemqoka - ukuze ubonise emnyango isitifiketi sokuzalwa womntwana, bese kuzoba khona imibuzo.
Ezokuzijabulisa isikhungo "Dino-epaki"
A ezihlukahlukene carousel ukugibela slot machines - konke lokhu balindelwe izivakashi isikhungo ukuzijabulisa. Ngaphezu kwalokho, kukhona ithrekhi uhlanga, i Maze okuyinkimbinkimbi futhi emoyeni hockey. Endaweni enjalo ingane ingakha achitha usuku lonke, futhi uma kuziwa ukukhathala, angakwazi uphumule ethokomele "Dino-cafe", etholakala endaweni efanayo. Maphakathi kukhona izinhlelo ezihlukahlukene zokuzijabulisa, efanelekayo sokuhambela yansuku zonke kanye imikhosi yezinsuku zokuzalwa.
Kuphi nezingane e Tyumen usuku? Ngokwesibonelo, e-Aqua Igalari. Ukuvakashela Aqua Gallery, okuyinto izimfudu, emachibini, izinhlanzi zasolwandle ikhaya, futhi oshaka kuyoba adventure real izingane. Njalo ngoLwesibili nangoLwesihlanu, izingane avunyelwe ukubukela piranha ukusuthisa, eels Moray nezinye izidalwa eziningi sea.
Laser ithegi arena, "Lazerfors"
Fans of imisebenzi yangaphandle wonke umndeni kufanele uvakashele "Lazerfors". A ezihlukahlukene game zimo khona okwamanje yokuncintisana uyonika izivakashi kwangijabulisa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, iqhaza ukuzijabulisa wonke umndeni ziyohlanganyela abazali nezingane.
Ezokuzijabulisa isikhungo "Nautilus"
Kuphi nezingane e Tyumen? Uma leyo ngane izokwazi ephakathi kwengu-3 no-10, phakathi nendawo ukuzijabulisa "Nautilus" - kukho olukhulu ezihlukahlukene zokuzijabulisa zezingane. Inflatables, ugibele ehlukahlukene ezithakazelisa kakhulu zohlelo izohamba imemori izingane izinkumbulo engcono.
Ezokuzijabulisa isikhungo "Treasure Island"
A ezihlukahlukene omkhulu lokuzijabulisa esilindele bonke izivakashi of the complex "Treasure Island." Ngaphandle nje kokuthi izincwadi ezikhangayo evamile, nazo zonke ezitolo ezinkulu, kule ndawo kukhona ukushushuluza roller. ezinamasondo Rental efakwe ngqo ku eziyinkimbinkimbi. Ngakho-ke, esebenzayo abathandi ukuzilibazisa zingaba nobumnandi maphakathi nawo wonke umndeni. Futhi abasebenzi ukuzijabulisa wemboni zinikezwe izivakashi omncane. Kubo, wonke platform yakhiwe, kucatshangelwa nobudala encane.
Uma unesithakazelo izinkambo zezingane e Tyumen, lokhu inkampani nje sihlinzeke izinhlelo ezifanayo. Ngokuvamile, izenzakalo ezinjalo emzini kuthatha amahora angaba mabili nesigamu. Intengo ithikithi ngokwesilinganiso ruble 150 umuntu ngamunye.
Naphezu uhlu enkulu kangaka ukuzijabulisa izindawo, kukude ephelele. Ngakho abazali abakwazi bakhathazeke ezokungcebeleka kanye nemizwelo izingane Tyumen. Ngemva iholide kuleli dolobha ezihlukahlukene ezithakazelisayo.
ATM Amakheli "Gazprombank" e eYekaterinburg. uhlu olugcwele